Ndị a niile Vivo mobiles ga-enweta ọha na eze beta nke Funtouch OS 9 na July | Gam akporosis
N’ọnwa gara aga, onye ama ama ama ama nke China bidoro Funtouch OS 9 ya na otutu nkwalite ohuru tinyere Vivo X27 na X27 Pro.
Vivo ọhụụ njirimara onye ọrụ ọhụụ ga-adị na nso nso na ngwaọrụ ndị nrụpụta ewepụtara na afọ gara aga. Anyị na-ekwu maka ya ...
Funtouch OS 9.0 bụ akwa nhazi nke Vivo ma dabere na ya A gam akporo. Nke a na-eweta atụmatụ ọhụrụ ndị a na-ahụbeghị tupu na nsụgharị ya ndị gara aga, dị ka ọrụ Ngosipụta Mgbe niile, UX gbanwere, ọnọdụ gbara ọchịchịrị na mgbanwe arụmọrụ dị iche iche.
Ekwentị Vivo na-abịa ga-enweta Funtouch OS 9 beta beta n'okpuru gam akporo Pie
Dabere na usoro ntọhapụ sistemụ arụmọrụ ọhụụ, ngwa ọrụ Vivo niile nke afọ gara aga, nke bụ ndị edepụtara n'elu, ga-enweta mmelite beta ọha na eze Funtouch OS 9 na July 2019.
Nke a customization oyi na-enye arọ customizations, dị ka hotara na mbụ mods. N'ihe zuru ezu, onye ama ama ama ama nke China gbakwunyere Ọrụ 72 na njikarịcha 55 dị n'okpuru mkpuchi. A na-echekwa interface ndị ọrụ maka ahụmịhe onye ọrụ ka mma, jiri akara kacha mma, akara ngosi, na ihe ngosi, yana ọbụna nnukwu mmiri.
Gburugburu dị n'etiti akara ngosi na akụkụ ahụ na-eme ya zuru oke maka smartphones na ngosipụta FullView. Ọhụrụ interface nke akwụkwọ ahụ aja na ngwa ọdịnala na-eme ka mkpokọta arụpụtaghị ihe ngwaọrụ. Akụkụ dịka ngosipụta oge niile na isiokwu gbara ọchịchịrị na-eme ka ọ dịrị ndị ọrụ Funtouch OS 9.0 mfe ịnwe nghọta na nkenke karịa, ma e jiri ya tụnyere mbipụta ya gara aga.
Anyị ga-echere ọnwa ole na ole tupu ụlọ ọrụ ahụ amalite ịgbalite mmelite na ngwaọrụ Vivo zuru ezu na mbiet ahụ. Site n'ụzọ, ole n'ime unu na-eche maka mmelite FunTouch OS ọhụrụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Vivo ekwentị ndị a niile ga-enweta beta bụ ọha nke Funtouch OS 9 na July
Xiaomi ga-emeghe ụlọ ahịa 5.000 na India n'otu afọ